DHAGAYSO:Gudiyada khayraadka labada aqal oo ka hor yimid Shirka London – DMS
HomeWararkaDHAGAYSO:Gudiyada khayraadka labada aqal oo ka hor yimid Shirka London
DHAGAYSO:Gudiyada khayraadka labada aqal oo ka hor yimid Shirka London
7-da bishan Febaraayo oo ku beegan maalinta berito ah ayaa la filayaa in Magalada London lag qabto shir ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Batroolka Xukuumadda Soomaaliya kaas oo looga hadlayo arrimaha Kheyraadka sigaar ah Shidaalka Soomaaliya, hayeeshee shirkaas waxaa kasoo horjeestay Guddiyada Khayraadka ee Baarlamaanka labada labada Aqal.
Guddoomiyaha guddiga Bay’adda iyo Kheyraadka dabiiciga ah ee golaha shacabka Xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed (Gama’diid) oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in isaga uu shirkaasi ka qeyb galeyn.
Waxa uu sheegay in shirkaasi ka Shaqeyntiisa ay leedahay Wasaaradda Batroolka isla markaasna uu yahay mid ay Wasaaraddu ugu sheegtay in uu yahay mid lagu beecgeynayaan macluumaadkii laga aruuriyay Xeebaha Soomaaliya ee Khayradka Shidaalka.
Sababaha shirkaasi uu gu baaqsay ayaan wax ka weeydiinay,waxana uu sheegay in isaga uu kamid ahaa xubnaha lagu casuumay,hayeeshee sababo isaga u gaar ah uu u diiday ka qeyb galka shirkaas.
Isaga oo sii hadayay ayuu sheegay in shidaalka Soomaaliya horay loo sahmiyay shirksna uu yahay mid suuqgeyn ama xayeeysiin ah,hayeeshee qabsoomida shirkaasi uu ahaa mid laga hordhacay oo ay jireen waxyaabo badan oo laga hormarin karay.
Waxaa la weeydiiyay Su’aal aheyd in shirkaasi dad badan ay qabaan in shidaalka Soomaaliya lagu xaraashayo,waxaana uu sheegay in Wasaaradda ay arrimahaas kala hadleen,laakin ay beeniyeen,waxaana uu sheegay in ay ka warsugayaan waxyaabaha kasoo baxa shirkaas.
Dhinaca kale Guddiga Kheyraadka Aqalka Sare ayaa si cad uga horyimid shirka la filayo in 7 Bishaan uu ka furmo Magalada London ee Wadanka Ingiriiska,kadib qoraal kasoo baxay Xafiiska Guddoomiyaha Guddigaas.
Guddoomiyaha guddigu Kheyraadka Aqalka Sare Sanoter Ilyaas Cali Xasan ayaa qoraal kasoo baxay Xafiiskiisa waxa uu ku sheegay in ilaa laga ansixiyo Shirciga Kheyraadka dalka,sidoo kalena aan la dhisin Shirciga maalgashiga, iyo Sharciga ilaalinta deegaanka uu hsirkaasi yahay mid sharcidarro ah.
DEG DEG:Qarax xoogan oo hada ka dhacay Muqdisho & Khasaare ka dhashay